मोबाइल म्यापर Google बाट गुगल नक्साहरू - जिओफुमाडास
अप्रिल, 2010 गुगल अर्थ / नक्सा, जीपीएस / उपकरण, topografia
र सोच्यो कि मेरो प्रविधिहरूले यी खिलौनेहरू चल्थे लगभग एक वर्ष, मलाई बताउन सकिन कि तिनीहरूले उहाँलाई बुझ्न सकेनन् र उनीहरूले राख्न रुचाउँथे प्रति। ठीक छ, हामी जीपीएस मोबाइल म्यापर of को एक जोडी प्रयोग गर्न एउटा तरिका खोजौं, जुन म बेस प्रोमार्क work र मोबाइल म्यापर अफिसको साथ पोस्ट प्रोसेसिंगको साथ काम गर्ने आशा गर्दछु।
पोष्ट-प्रोसेसिंग बिना, यो कम्प्युटर कुनै पनि ब्राउजर जस्तै छ। पोस्ट प्रोसेसिंगको साथ यसले तपाईंलाई जित्छ Trimble देखि एक जूनो एससी।
केवल तिनीहरूलाई रोक्न, उनीहरूलाई Google नक्सामा जडान गर्ने प्रयास गरौं, पढ्ने प्रयोग गरेर जुन जुन गत वर्ष अप्रिलबाट बनेको थियो।
इन्टरनेटमा जडान गर्नुहोस्
MobileMapper6इन्टरनेटमा जडान गर्न तीन तरिकाहरू ल्याउँछ:
ब्लुटुथ, जुन धेरै व्यावहारिक हो जुन यो मोबाइल फोन मार्फत वा केहि गर्न सकिन्छ जुन फोन अझै पनि फोन गर्दछ।
USB सँग एक पीसीमा जडान भयो जसमा Activesync मार्फत इन्टरनेट पहुँच छ। यो नेटबुक हुन सक्छ, ती मध्ये एक $ 300, र एक अल्काटेल-प्रकारको USB मोडेम, अब धेरै जसो टेलिफोन कम्पनीहरूले प्रदान गरेको सेवा।
मलाई लाग्छ तपाइँसँग VPN जडानको साथ अर्को छ तर मलाई यो थाहा छैन कि यसले कसरी काम गर्दछ। अफसोस कि यी खेलौनाहरूमा अन्य प्रकारको वायरलेस जडान समावेश छैन, जस्तै जुन एक वायरलेस मोडेमको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ।
गुगल नक्सा डाउनलोड गर्नुहोस्
यसका लागि, तपाईंले पृष्ठमा मोबाइलको लागि Google स्रोतहरूमा जानुपर्छ http://m.google.com। प्रणालीले स्वतः पहिचान गर्दछ कि तपाईं विन्डोज मोबाइलबाट जडान गर्दै हुनुहुन्छ, र यसलाई डाउनलोड गर्न विकल्प देखा पर्दछ।
यसले डाउनलोड र स्थापना अधिकार दिन दुई पटक सोध्दछ, तर एक मिनेट भन्दा कममा यो स्थापना हुन्छ। यो सक्रिय गर्न वा असक्रिय गर्न सम्भव छ:
जीपीएस सक्रिय गर्नुहोस्।
यसको लागि यो मेनूबाट मात्र गरिनु पर्छ: विकल्पहरू> GPS सक्रिय गर्नुहोस्।
यसलाई कन्फिगर गर्नका लागि, यो विकल्पहरू> GPS कन्फिगर गर्नुहोस्मा गरिन्छ। तपाइँ विन्डोज प्रबन्धित वैकल्पिक छोड्न सक्नुहुनेछ, तर तपाइँ अझ राम्रो परिणामहरू पाउन सक्नुहुनेछ यदि एक विशेष पोर्ट सक्षम गरिएको छ भने।
हामी COM1 र 9600 को प्रयोग गर्नेछौं।
आश्चर्यजनक, कुनाको नीलो बटनको साथ, तपाइँ क्लिक गर्नुहुन्छ र यो तपाइँलाई आफैंको स्थितिमा लैजान्छ, सम्भावित सटीक त्रुटिको पारदर्शी पा wheel्ग्रासहित जुन घट्ना घट्छ अधिक उपग्रहहरू देखिए पछि। सुरुमा यो लगभग मेरो अफिसमा झर्छ, उपग्रहहरूको साथ जुन यो विन्डोको स्पष्टताबाट प्राप्त हुन्छ तर यो स्थिर भएको केही समयको साथ तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि यसले कसरी २० मिटरको दायरामा उत्तम स्थान दिने प्रयास गर्दै स्पिन गर्न थाल्छ।
तपाईंले हेर्दै गरेको उपग्रह संख्या माथिको दायाँ तिर देखाइएको छ। कारमा जानको लागि धेरै व्यावहारिक, हामी हेर्नेछौं क्याप्चर डाटाको पोष्ट प्रोसेसिंग गर्दा के हुन्छ।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो कुल स्टेशन डेटा डाउनलोड गर्नुहोस्
अर्को पोस्ट के PlexEthth 2.0 ले ल्याउँछअर्को »
Mobile 56 जवाफ "मोबाइल म्यापर from बाट Google नक्सा" लाई
होइन।6मोबाइलमेपरले बेसको रूपमा सेवा दिन सक्दैन।
हाय, यदि मैले दुई जीपीएस मोबाईमोपपर6भएको थिएँ, के म डेटा लिनको लागी एक आधारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छु?
लुइस जोस भन्छिन्:
जुन एक समर्थित जीपीएस हो,6मोबाइल म्यापको रूपमा त्यहि परिशुद्धता छ। धन्यवाद
तपाईंको देशमा एशटेक वा टोपकॉमको वितरकसँग।
एलन गार्सिया भन्छिन्:
क्या तपाईं मलाई बता सकते हो कि तपाईंले मलाई एक मोबाइल Mapper को सक्रियकरण कोड दे सकते हो जहां6गुम गयो र मलाई कोड नहीं है, धन्यवाद
यदि तपाइँले तिनीहरूलाई अलग-अलग स्तम्भहरूमा छ भने स्पष्ट गर्नुहुन्न भने, तपाईंले हेर्नु आवश्यक छ भने तिनीहरूलाई सम्बद्ध गर्न आवश्यक छ।
मीरा यो लिङ्क:
सम्झौता गर्नुहोस्, तपाईंले दशमलव ढाँचा समायोजित गर्नुपर्दछ, ताकि AutoCAD ले ती हजारौं विभाजकहरूलाई गलत अर्थ नबुझ्दछ। तपाइँ त्यो विन्डोज नियन्त्रण प्यानलको क्षेत्रीय सेटि settingsहरूमा परिवर्तन गर्नुहोस्।
म एक्सेल मा यो निर्देशांक छ, र मलाई AUTOCAD लाई पोलिलाइन को रूप मा पठाउन को आवश्यकता हो र मलाई थाहा छैन कि उनको favpr कुनै को द्वारा मलाई कसरि मदद गर्न को लागी धन्यवाद
कोड X MAGNA कोड र MAGNA
मलाई थाहा छैन कि तपाई कुन मैनुअल देख्नुभयो, यो एक हो कि म जान्दछु.
अर्डर सारांशमा es:
- मोबाइल म्यापिङ प्रोग्राममा राख्नुहोस्
तपाईँको क्षेत्रको सेटिङहरू सिर्जना गर्नुहोस्
- .map फाइल बनाउनुहोस् जुन तहहरू समावेश हुनेछ
शप तहहरू सिर्जना गर्नुहोस् जहाँ तपाइँ डेटा भण्डारण गर्नुहुन्छ (भूखण्ड, सडक, चिन्ह, आदि)
डेटाको ब्याजमा तह लगाउनुहोस्।
मोबाइल म्यापि the भनेको मोबाइल म्यापर ल्याउने कार्यक्रम हो, यसले .map र .shp फाईलहरू सिर्जना गर्न सक्दछ, यसमा डाटा क्याप्चर बाहेक अरू धेरै कार्यहरू हुँदैन। यदि तपाईं क्याप्चर गरिएको जानकारीबाट अन्य चीजहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले shp लेयरहरू डाउनलोड गर्नुपर्नेछ र तिनीहरूलाई CAD वा GIS प्रोग्रामको साथ विश्लेषण गर्नु पर्छ।
अर्को विकल्प भनेको अर्को भुक्तानी कार्यक्रम जस्तै ArcPad वा कार्टोप्याड प्रयोग गर्नु हो जसले थप विशेषताहरू हुन सक्छ।
तपाइँले अर्को आधारको विरुद्ध डेटा प्रशोधन गरी यसको शुद्धता बढाउनुहुन्छ, तपाइँ यो कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुन्छ मोबाइल मेपर कार्यालय, एक पटक स्थापित बिन्दुहरू कम छन् र यदि इन्टरनेटमा कम्प्युटर जडान भएको छ भने नजिकैका आधारहरू खोज्न चार्जमा छ।
यसले डेटा एकत्रित गर्न सक्दछ सहि राम्रो सटीकता।
धेरै राम्रा दिन सर जियो .. म टोपो सर्वेक्षण गर्ने प्रक्रिया जान्न चाहन्छु .. म्यापर6को साथ म्यानुअलले केवल आधारभूत कुरा ल्याउँदछ तर मैले सटीक अपरेशन फेला पार्न सकिन जुन अंक, मार्क पोष्टहरू, तिनीहरूको अजीमुथ, उनीहरूको निर्देशांक, अभिसरण ... र हुनसक्छ म यसलाई एकल टोलीसँग गर्न सक्दछ आधारको रूपमा एक बिना नै .. म पहिले तपाईंको ध्यानको प्रशंसा गर्छु .. ट्याबास्को मेक्सिको
नमस्ते, मसँग2मोबाइल म्याप6छ, तर मलाई थाहा छ कि तिनीहरूसँग केही त्रुटि छ, म उनीहरूको शुद्धता कसरी बढाउन सक्छु? मलाई कुनै अतिरिक्त कार्यक्रम चाहिन्छ?
याद गर्नुहोस् कि फाँटमा प्राप्त पोइन्टमा लगभग 2.50 मिटर पोष्ट प्रोसेसिंग बिना त्रुटि रहेको छ। एक पटक पोस्ट प्रोसेस गरिएको तपाईंसँग 1.00 मिटरको त्रुटि हुनेछ।
विचार प्राप्त गर्नुहोस्, कि तपाईंको पहिलो पोइन्ट कहीं पनि व्यासमा5मिटरको घेरामा छ। दोस्रो व्यासमा2मिटरको वृत्त।
जब तपाईं फेरि फिल्डमा जानुहुन्छ भने, तपाईंको बिन्दु एकै सर्कलमा जहाँ पनि हुन्छ।
fredy hernadez aguirre भन्छिन्:
हेर्नुहोस मसँग6मोबाइल म्यापर छ तर मेरो प्रोसेसेश बिना नै मेरो प्रश्न यो छ कि जब म इलाकाबाट पोइन्ट लिन्छु र दिन पछि म उही इलाकामा फर्कन्छु म समान बिन्दुहरू हुन्छु? र तपाइँ पोस्टप्रोसेससँग के सटीक हुनुहुनेछ? र यदि मैले पोष्ट प्रसेसमा पहिले नै पोइन्टहरू प्राप्त गरें र फिल्डमा फर्कें भने के मैले उस्तै पोइन्टहरू प्राप्त गर्ने थिए? यदि तपाईं मलाई जवाफ दिन सक्नुहुन्छ भने, म धेरै आभारी हुनेछु
यो सीमितताको कुरा होइन, तर उपयोगिता र सम्बन्धित डाटाको प्रकारको हो।
उदाहरणका लागि, तपाईं पार्सलहरू को एक पत्र हुन सक्छ, यो बहुभुजको प्रकार हुनेछ, तर तपाईं दर्ता गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि व्यापार अर्को पत्र हुनेछ र तपाईं मार्गहरू शौचालय रेल दर्ता गर्न एउटा नयाँ प्रकारको पत्र linestring ocuparás चाहनुहुन्छ भने यो मामला मा, अंक हुनेछ।
त्यो विभिन्न परतहरू को अर्थ हो।
पृष्ठभूमि नक्साहरू सिर्जना गर्न तपाईंले मोबाइल मेपर कार्यालयको प्रयोग गर्नु पर्छ:
उपकरणहरू> पृष्ठभूमि नक्शा
यहाँ तपाईँले वेक्टर वा रेस्टर तहहरू थप्नु भएको छ जुन तपाईंले पृष्ठभूमि नक्साको लागि अपेक्षा गर्नुभएको छ, एक पटक यो तयार भएपछि तपाइँ यसलाई जीपीएसमा अपलोड गर्दै
फाइल> gps मा अपलोड गर्नुहोस्> पृष्ठभूमि नक्शा
नमस्ते, म जान्न चाहन्छु के के छ तह को सीमा के छ भने भौगोलिक आषा या एकाइहरु को संख्या जुन मैले प्रत्येक तह को लागि दर्ता गर्न सक्छन्। वा अन्य शब्दहरूमा जब मैले अर्को लेयर प्रयोग गर्दछु, केहि बिन्दुमा मेरो जीपीएसले मलाई बताउनेछ कि म एक पत्रमा एक इकाई रजिस्टर गर्न सक्दैन; मलाई यो शंका छ र म्यानुअलले यसलाई स्पष्ट गर्दैन, यो केवल भन्छ कि म नयाँ तह बनाउन सक्छु र म कहाँ पृष्ठभूमि नक्शा प्राप्त गर्न सक्छु हेर्न चाहन्छु।
के तपाईं कोस्टा रिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नक्साको कुरा गर्नुहुन्छ?
तिमीले के भयो र?
कोस्टा रिकामा मेरो म्यागेलान छ, मैले पहिले नै गार्मीनको देशको नक्शा "अनमास्क" गरिसकेका छन्; अब मैले यसलाई मोबाइल म्यापर 3.4 वा 2.7 सफ्टवेयर प्रयोग गरेर पृष्ठभूमि नक्शामा माउन्ट गर्न आवश्यक छ; तर म यसलाई अनलाइन खोजी गर्ने प्रयासमा पागल भएको छु। तिमीलाई थाहा छैन म कहाँ पाउन सक्छु।
यो प्रदर्शन हुनुपर्दछ। पोइन्टको ढाँचा परिवर्तन गर्न प्रयास गर्नुहोस्, किनकि AutoCAD मा पूर्वनिर्धारित ढाँचा केहि थोप्लाहरू हुन्छन् जुन मुश्किलले नै देखिन्छ।
नमस्ते अघिल्लो संस्करण मोबाइल माईक्स Xicum XCUMX मा खरिद गर्नुहोस् र यदि तपाईं सही हुनुहुन्छ भने तपाइँसँग DXF फाइल फाइलहरू निर्यात गर्न उपकरण छ। उपकरण प्रयोग गर्नुहोस् र म एक dxf फाइल सिर्जना गर्दछु तर जब म यसलाई स्वत: क्याडको साथ कल्पना गर्न चाहन्छु म यसलाई हेर्न सक्दिन। किनकि यो मोबाइल Mapper प्याजमा प्रदर्शित रूपमा प्रदर्शित हुनेछैन। मैले उपकरणको प्रयोग गर्दा मैले फाइल सिर्जना गरे तर मैले स्वत: क्याड प्रयोग गर्दा मैले हेर्न सक्दिन।
स्पष्टीकरणको लागि धन्यबाद मलाई लाग्छ कि यो धेरै स्पष्ट छ, धेरै धेरै धन्यवाद
म भ्रम देख्छु। तपाईंले स्न्याप उपकरण प्रयोग गरी के मापन गर्नुहुनेछ त्यो सँधै सटीक हुनेछ, दुर्भाग्यवस कि गुगल अर्थसँग यो छैन र तपाईंले गर्नु भएको उपायहरू तपाईंको आँखाले देख्ने कुराको अनुमानित हुन्छ र तपाईंको माउसमा पुग्न सक्छ, यो तपाईंको दृष्टिकोणबाट पनि प्रभावित हुन्छ। न यसका लागि मोबाइल म्यापर अफिस एक्सएनयूएमएक्स धेरै राम्रो छ।
गुगल अर्थ डाटा भिजुअलाइज गर्नु छ, मोबाइल म्यापर अफिस भिजुअलाइज र पोष्टप्रोसेस डाटा हो। तर तपाइँ त्यहाँ मापन केहि पनि सही छैन किनकि यी प्रोग्रामहरू त्यसका लागि हुन्।
सम्पादन, मापन, हेडि and र दूरी चार्ट, आदि गर्नका लागि तपाईंले माइक्रोस्टेशन, AutoCAD वा gvSIG प्रयोग गर्नु पर्छ, जसमा स्नैपको लागि टोपोलॉजिकल विकल्पहरू छन्। म ग्यारेन्टी दिन्छु कि मापन गुगल अर्थ र मोबाइल म्यापेर अफिसले तपाईलाई दिने बराबर हुँदैन, तर यो सटीक मापन हुनेछ (मापनको, क्षेत्रमा वास्तविकताको होइन)।
मलाई पनि स्पष्ट पार्नु पर्छ कि यो पनि होइन "मोबाइल म्यापर6अफिस" प्रोग्राम जुन नयाँ MM6 उपकरणहरूसँग आउँदछ जुन "मोबाइल म्यापर अफिस" भन्दा पहिले आइसकेको उपकरणहरूसँग बेचिन्थ्यो। पहिलोमा dxf मा निर्यात गर्न सक्ने क्षमता थियो त्यसैले तपाईं फाइलहरू सीएडी प्रोग्रामको साथ काम गर्न सक्नुहुनेछ।
राम्रो यदि सत्य हो कि म स्पष्ट छैन, मेरो प्रश्न जीपीएस मोबाइल मैपर संग निम्नलिखित सय सय चालीस अंक हो। यो arratre google धरती को इंगित गर्दछ र मैले देख्न सक्छ कि यो गर्न को लागी Google को उपकरण संग बिन्दु बीचको दूरी देख्न सक्छ। त्यसपछि मैले अफिस मोबाइल म्यापर6प्यास प्राप्त गर्न सकेँ जसले मलाई बिन्दुहरू खोल्न र बिन्दु र बिन्दु बीचको दूरीलाई पनि अनुमति दिन्छ। र यो थाहा पाउँछ कि जीपीएसको कार्यालयको साथमा मापदण्डहरू Google eart कार्यक्रमको साथमा प्रत्येक मापको लागि एक वा दुई मीटरमा भिन्न हुन्छ। मेरो प्रश्न यो माप मा अधिक विश्वसनीय छन्। तपाईं कल्पना गर्नुहोस् कि मैले यी बिन्दुहरू स्वत: मा लोड गर्न सक्थे र बिन्दुको बिन्दुको मात्रा र बिन्दुको बिचमा मैले अन्य माप दिन्छु। जुन सबै भन्दा धेरै विश्वसनीय हुनेछ।
तपाईंका फरक प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्:
>> यो छविहरूको स्रोतमा निर्भर गर्दछ, धेरै यूरोप र संयुक्त राज्य अमेरिका धेरै सटीक छन् तर हिस्पैनिक देशहरूमा उनीहरू 30 मिटरसम्म विस्थापन हुन्छन्। पोष्ट प्रोसेसिंग बिना नै मोबाइल म्यापरले 2.50 मिटरको शुद्धता दिन्छ, र सबवेको नजिक पोष्ट प्रोसेसिंगको साथ।
>> मैले तपाईंको अर्को प्रश्न बुझ्न सकिनँ। मोबाइल मेपर कार्यालय यो सफ्टवेयर हो जुन तपाइँले पोस्टप्रसिष्टिङ गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ, यो टीम होइन।
>> तपाइँ मोबाइल म्यापरमा कुनै पनि कार्यक्रम जो Windows मा चलाउछ, जस्तै ArcPad, एक्सेल, वर्ड, पावरपोइन्ट, आदि राख्न सक्नुहुन्छ।
>> मोबाइल मेपर कार्यालय (कार्यक्रम) तपाईंलाई dxf मा डेटा निर्यात गर्न अनुमति दिन्छ, र तपाईंले तिनीहरूलाई AutoCAD हेर्न सक्नुहुन्छ।
जो माप अधिक सटीक हो जुन गूगल eart संग वा एक मोबाइल मैपर प्याइस संग बनाइएको छ
नमस्ते किनकी म अंकहरु संग चिह्नहरु को निशान नहीं गरेर सकता कि म जीपीएस देखि मोबाइल मापर कार्यालय देखि आयो तर यसलाई केवल अंकहरु संग म यसबाट फ्रेम
म मोबाइल म्याप अफिसबाट स्वकोडमा अंक आयात गर्न सक्छु
नमस्ते कि अन्य प्रोग्रामहरु म आफ्नो जीपीएस मोबाइल मैपर मा स्थापित गर्न सक्छन्
नमस्ते google नक्सा मोबाइल म्यापिंग बाट6कुनै पनि देशमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
कुनै PERZONAS THE MM6 मलाई भइरहेको यदि मेरो मेलमा मोबाइल नक्साङ्कनकर्ता OFICCE पठाउनु मलाई SALIO सीडी क्षतिग्रस्त छ नमस्कार जांच बनाउन सक्छ र म उपकरण एक प्रसारण लाइन को एक georeferencing केही रेकर्डहरू तर म कार्यालय बिना केही गर्न देख्न सक्छौं।
हेलोले मलाई डेनियल सिकाइदिने र पीडीएफमा प्रयोगकर्ताको म्यानुअल पठाउनको लागि तपाईंलाई धन्यवाद दिनुभएको छ।
होलो डेनियल अपेक्षाकृत सजिलो छ यदि तपाई मलाई तपाईंको ई-मेल दिनुहुन्छ मैले तपाईलाई एक सूचना पठाएको छु ताकि तपाईं केहि रिपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ
मैले केवल MM6 किन्। म कम्पास क्यालिब्रेट गर्न सक्षम भएन, मैले 20 समय भन्दा बढी प्रयास गरेको छु, कुनै सिफारिसहरू?
म अझै पनि बुझ्न उपकरण कसरी प्रयोग गर्ने छैन। मैले यसलाई अंकहरू, बहुभुज र मार्गहरू उठाएको खरिद गरे। के कसैलाई थाहा छ वा तपाईं मलाई राम्रो ट्यूटोरियलमा मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
नमस्ते म6कार्यालय मोबाइल मैपर डाउनलोड गर्न मा असमर्थ हो जो उनि मलाई दिए यदि कसैले यो मेरो साथ साझा गर्न को लागि मलाई दिए छ .म धन्यबाद मेरो मेल हो raulartola1@gmail.com
यो विच्छेद गरिएको छैन, के हुन्छ हुन्छ कि url खराब तरिकाले निर्माण गरिएको छ।
यस तरिकालाई परीक्षण गर्नुहोस्:
सफ्टवेयर अलग छ, म बुझ्छु। तपाईं यसलाई इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, तर पोष्ट प्रोसेस एक्टिभसन कोड खरीद गर्नुपर्नेछ।
नमस्ते म हन्डुरास यहाँ किन्न किनभने खरीद monile6जीपीएस नक्साङ्कनकर्ता कार्यालय समावेश यदि पनि जान्न चाहन्छु र यो बेचिएको मलाई अब 100 डलरमा अलग कार्यालय मेरो लागि बेच्न चाहन्छ पसलमा बाहिर जान्छ
हेलो लिङ्क स्पष्ट रूप देखि तल छ वा अवस्थित छैन तर केहि अन्य ठेगानाको उत्तरको लागि धन्यवाद जहाँ यो हुन सक्छ।
निश्चित छ, तपाईं यसलाई Ashtech पृष्ठबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ
ftp://ftp.promagellangps.com/ मोबाईल%20 म्यापिङ् / मोबाईलमैपेर% 20Office/Software/
मोबाइल नक्साङ्कनकर्ता6Google नक्सा, Google आवेदन एक मोबाइल बाट नेभिगेट गरिएका प्रयोग जडान गर्न सकिँदैन, तर मोबाइल म्यापिङ कार्यालय मलाई थाहा छ कि KML तहहरू व्यवस्थापन गर्न सक्दैन वा Google धरती लीन।
नमस्ते म एक जीपीएस मोबाइल म्यापिङ6छ तर खरिद मलाई डिस्क मोबाइल नक्साङ्कनकर्ता ofice समावेश गरिएको थिएन मेरो प्रश्न तपाईं इन्टरनेटबाट निःशुल्क डाउनलोड गर्न वा यसलाई र मेरो अन्य प्रश्न छ किन्न म मोबाइल म्यापिङ कार्यालय6र Google प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने हुन सक्छ कि छ नक्शाहरू सिर्जना गर्न ईर्ट गर्नुहोस्।
Eloy Romo Luján भन्छिन्:
यो6Mobilemapper संग कुनै पनि पीसी को बिना कुनै सफ्टवेयर को बिना एकत्रित डेटा डाउनलोड गर्न सम्भव छ।
नमस्कार र धन्यवाद।
कसैले तपाईंको संदेहहरू समाधान गर्न उत्कृष्ट छ।
तपाईंलाई यसलाई सुस्त तुल्याउनु पर्छ, एक फ्लैट सतहमा, तपाईंले यो अनुरोध गर्दा उपकरणहरू बदल्नुहुन्छ।
नमस्कार कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्दछ म मेरो मोबाइलमेपरको जीपीएस सक्रिय गर्न सक्दिन र कम्पास क्यालिब्रेट गर्न चाहान्छु मलाई यो सन्देश पठाउनुहोस् "तेर्सो अक्ष क्यालिब्रेसन असफल कृपया फेरि प्रयास गर्नुहोस्" मलाई मद्दत चाहिन्छ
नमस्कार, के कोहीले मलाई मोबाईलमेपेर shape मा आकार फाइल लोड गर्ने समस्या समाधान गर्ने उपाय बताउन सक्छन। ...
नमस्ते दिउँसो बस एक MM6 किनेको र म जडान गर्न मेरो ल्यापटप प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, र प्रक्रिया गरे मोबाइल म्यापिङ र केही, जांच र मोबाइल म्यापिङ, पुन: सुरु र केही विस्थापन स्थापित गर्ने instructive निशान रूपमा, सक्रीय अद्यावधिक र केही कसैले porfavooorrrrr मलाई uuuurgeeeeeee, मलाई मदत गर्न सक्छ, मेरो इमेल century21mx @ हटमेल छ, तिनीहरूले agradecere समर्थन
आफैलाई जटिल नगर्नुहोस्, एक GIS प्रोग्राम प्रयोग गर्नुहोस्। त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा छ र ढिला वा पछि तपाईंले उनीहरूको सामना गर्नुपर्छ।
फिडेंसियो गार्सिया भन्छिन्:
मेरो संस्करण हो 1.0.1.1
र म तपाईलाई कहाँ फेला पार्न सक्दिनँ dxf मा
जहाँसम्म मैले देख्न सक्छु, यो सफ्टवेयरले तपाईंलाई dxf मा निर्यात गर्न दिन्छ, यद्यपि यो गर्दा तपाईले एसपीपीसँग सम्बन्धित डेटा गुमाउनु हुनेछ जुन डीबीएफमा भण्डार गरिएको छ।
डाटा जुन जीपीएस मोबाइल मेपर, SHP ढाँचामा छ, तपाईं कुनै पनि CAD / GIS प्रोग्राम जस्तै काम गर्न सक्नुहुन्छ: AutoCAD, ArcView, Microstation, gvSIG, आदि।
मोबाइल मेपर जीआईएस कार्यक्रम होइन, यो GPS डाटा पोस्टप्रोसेसो गर्न प्रोग्राम हो, तपाईंलाई राम्रो सटीकता दिन।
Ayjuesu !! त्यो गम्भीर छ
किनभने यो तब मानिन्छ कि जब म एक बिन्दु रेकर्ड गर्दछु «र त्यो क्षणमा म स्थानमा हुन्छु स्क्रिनमा निर्देशांक हुन्छु - तर
यदि मैले नोटबुकमा तिनीहरूलाई लेख्नुभएन भने, के उनीहरूले उनीहरूको प्रक्रिया नगरेसम्म उनीहरूलाई फेरि देख्न सक्दैनन्?
र एकै कुरा, मोबाइल म्याप अफिसमा मैले स्क्रिनमा फिल्ड डेटा देख्छु, तर म कसरी निर्यात गर्न वा CAD को लागि निकाल्छु?
या shp परिवर्तित dxf मा एक अतिरिक्त कार्यक्रम को उपयोग गर्नु पर्छ?
मलाई यति सोच्दैन, तपाई मोबाइल मैपर कार्यालय वा कुनै अन्य जीआईएस प्रोग्राममा राख्नुहुन्छ जसको साथ तपाईंले फाइल प्रकार देख्न सक्नुहुन्छ .shp
जवाफ दिनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद!
तर मलाई सबैभन्दा धेरै हिट गर्ने प्रश्न ...
यदि म केहि बहुभुज बढ्दै क्षेत्रमा छु
र जब म कुनै इन्टरनेट कैफेमा पुग्छु म समकक्षहरू हेर्न चाहन्छु
बढेको भाँडा को, म यसलाई सीधा GPS मा गर्न सक्छु?
अतिरिक्त कार्यक्रमहरू आवश्यक पर्दैन?
जब तपाईंको मोबाइल मैपरको साथ डेटा कैप्चर गर्दै यो आवश्यक थियो कि तपाईंले एक्सटेन्सनको साथ एक परियोजना सिर्जना गर्नुहोस्। नक्सा, र विस्तार सहित तह .shp। यो पोष्टमा यो विस्तारमा व्याख्या गरिएको छ।
त्यो डेटा डाउनलोड गर्न, तपाईंले जीपीएसबाट SD कार्ड हटाउन आवश्यक छ, र यसलाई तपाईंको पीसीमा राख्नुपर्दछ, त्यसपश्चात् ती फाईलहरू डाउनलोड गर्नुहोस्। एक्टिभसिन्कको साथ युएसबी मार्फत पनि।
त्यो डाटा हेर्नको लागी तपाईले मोबाइल मैपर कार्यालय अफिस सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुहुन्छ, जुन GPS को खरिदको साथ आउछ भने, यदि तपाइँ पोस्टप्रसिष्टिङ गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, यो यो पोस्टमा वर्णन गरियो।
यदि तपाईले तिनीहरूलाई AutoCAD मा लोड गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले आकार फाइलहरू dxf मा रूपान्तरित गर्नुपर्छ, जुन धेरै प्रोग्रामहरूसँग गर्न सकिन्छ।
के तपाई मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ कि म कसरी समन्वय जानकारी देख्न सक्छु
जुन तपाईले एक जीपीएस मोबाइल म्यापेर6सँग लिनुभयो
मलाई यो जानकारी स्वत: समाधिमा राख्न आवश्यक छ।
मोबाइल म्यापर 6, पोस्ट प्रोसेसिंग बिना कुनै पनि ब्राउजर जस्तै छ। डाटा3र5रेडियल मीटरको बीचमा छ।
यो सर्वोत्तम हो कि उनीहरूलाई संयुक्त रूपमा खरीद गर्नुहोस्, जस्तै Promark3 र एक वा बढी मोबाइल मैपर 6।
प्रोर्कर्क तपाईंले आधारको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ, र अन्य डेटासँग, र अन्तमा, पोष्ट प्रोसेसर मोबाइल म्यापर अफिस प्रयोग गर्दै सन्दर्भको रूपमा प्रयोग गर्दै के प्रोर्कर्क कस्तो भयो जब यो स्थिर थियो, र यसले तपाईंलाई एक भन्दा कम मिटरको परिमाण दिन्छ।
वैसे, तपाईं कुन देशमा हुनुहुन्छ?
भर्जिन मरियम भन्छिन्:
म6मोपर को बारेमा अधिक जान्न चाहन्छु किनभने यो अफिसको लागि केही किन्न चाहन्छु, म कुनै पनि थप बिन्दुको लागि बिना catatsro मा काम गर्दछ एक cordial बधाई